မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကြီး ပျက်စီးပုံ နည်းလမ်းများ – XB Media Myanmar
ကမ္ဘာပျက် တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တပည့်တော်မ သိချင် ပါတယ်ဘုရား။ ယခု ကမ္ဘာ ဟာ ဘဒ္ဒကမ္ဘာ လို့ ဆိုပါတယ်။ သို့သော် လည်း ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမ က ဘုရား တွေ ပွင့်ခဲ့ တယ် ဆိုတဲ့ အဆိုက ဘယ် လိုမျိုး များ ကို ဆိုလို တာ လည်း ဘုရား၊ ကမ္ဘာ ပျက် တာက ဘယ်လိုမျိုး ဖြစ်တာလည်း ဘုရား။ ဘာကြောင့် ကမ္ဘာ ပျက်ရတယ် ဆိုတာကို လည်း သိချင် ပါတယ် ဘုရား။
ကမ္ဘာ ပေါင်း များစွာ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါင်း များစွာ ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ ရေတွက် လို့ မရပါ။ ကမ္ဘာ ဟာ ရေတွက် လို့ မရသလို သတ္တ၀ါ တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ဟာ လည်း ရေတွက် လို့ မရအောင် များပြား လှပါတယ်။ဗုဒ္ဓ လက်ထက် က ဥပသာလက အမည် ရှိတဲ့ ပုဏ္ဏားကြီး ဟာ ရာဇဂြိုလ်မြို့ ကို ရံပတ်ထား တဲ့တော င်ငါးလုံး ထဲက ဂုဇ္ဈကုဋ်တာင်ပေါ် ကို တက်သွား ပြီး တောင်ထိပ် က မြေပြန့်လေး မှာ သူ့ကို မြု တ်ဖို့ သားဖြစ်သူ ကို ပြတယ်။
ပြီးတာ နဲ့ တောင်အောက် ကို ပြန်ဆင်း လာတဲ့ အခါ ဘုရားရှင် နဲ့ တွေ့ တယ်၊ အကျိုး အကြောင်းမေးပြီး တာနဲ့ ဘုရားရှင် ဟာ လူသေ မမြုပ်ဖူး သေးဘူးလို့ ပုဏ္ဏားကြီး ယူဆ ထားတဲ့ နေရာ ကို လိုက် ကြည့် ပြီး ဒီဂါထာ ကို ဟောကြား ပါတယ်။ ဒီဂါထာ အဆုံး မှာ ပုဏ္ဏားကြီး ဟာ သောတာပန် တည် ပါတယ်။ ဒီဂါထာ ဟာ သတ္တ၀ါ တစ်ယောက် ရဲ့ ဘ၀တွေ ဟာ ဘယ် လောက် ထိ အောင် များပြား တယ် ဆိုတာ ကို ပြပါတယ်။
ပုဏ္ဏားကြီး သင်ယခု ညွှန်ပြ သော နေရာ ၌ ဥပသာလက ဟူသော အမည် ဖြင့် သင် ၏ အလော င်းေ ကာင် ပေါင်း တစ်သောင်း လေးထောင် တိတိ မီးသဂြိုလ် လောင် ကျွမ်း မြုပ်နှံ ခဲ့ဖူး လေပြီ။လော က မြေအပြင် ၌ လူသေ ကောင်ပုတ် မမြုတ်ဖူး သော နေရာ ဟူ၍ မရှိပေ။
တောင်ပေါ်က သုံးပေ ခြောက်ပေ နေရာ ကွက်လပ်လေး မှာ တောင် အလောင်းကောင် ပေါင်း ဥပ သာလက အမည် တစ်ခုတည်း နဲ့ တင် တစ်သောင်းလေးထောင် မြုတ်နှံ ပြီးသွားပြီ ဆိုတော့ တခြား နာမည် နဲ့၊ တခြား မြေပြန့် နေရာတွေ မှာ ဘယ်လောက် ထိ သေခဲ့ မြှပ်နှံ ခဲ့မယ် ဆိုတာ သတိ သံေ ၀ဂ ယူသင့် ပါတယ်။
ဘုရား တွေ ပွင့်တယ် ဆိုတာ သူ့ကမ္ဘာ နဲ့သူ ပွင့်တာ ကို ပြောတာပါ။ ဒီ ဘဒ္ဒ ကမ္ဘာမှာ ဘုရား ငါးဆူ ပွင့်ပြီး မပြီးမချင်း၊ ကမ္ဘာ က မပျက်ပါဘူး။ ကမ္ဘာပျက် ပုံရယ် ဘာကြောင့် ပျက်ရ တယ် ဆိုတာရယ် ကိုပေါင်း ပြီး ဖြေပါမယ်။ ကမ္ဘာ ဟာ မီးဖျက်တဲ့ ကမ္ဘာ၊ ရေဖျက်တဲ့ ကမ္ဘာ၊ လေဖျက် တဲ့ ကမ္ဘာလို့ သုံးမျိုး ရှိပါတယ်။
လိုချင်တဲ့ လောဘ ဓါတ် တွေ လူသား တွေ သန္တာန်မှာ အားကြီး လာရင် ကမ္ဘာ လောက ကြီး အင တ်ဘေး ဆိုက်တယ်၊ လောဘ ဓါတ် ဟာ ဒီထက် ပို၍ အားကြီး လာမယ် ဆိုရင် ကမ္ဘာ လောကကြီး ဟာ မီးလောင် ပြီး ပျက်စီး သွား ရတယ်။ ကမ္ဘာ ဖျက် မီးလောင်ရင် မြေကြီး ပါ မကျန်အောင် လော င်ကျွမ်း တဲ့ အတွက် အပါယ် လေးဘုံ၊ လူ့ဘုံ၊ နတ်ပြည် ခြောက်ထပ်၊ ဗြဟ္မဘုံ နှစ်ဆယ် ထဲက ပထ မ ဈာန် ဗြဟ္မ ဘုံ ၃ဘုံ ပါသွားတယ်။
စိတ်ဆိုး တဲ့ အမျက် ထွက်တဲ့၊ ရန်ငြိုး ဖွဲ့တဲ့ ဒေါသ ဓါတ်တွေ လူသား တွေ သန္တာန်မှာ အားကြီး လာ ရ င် ကမ္ဘာ လောက ကြီးက လက်နက်ဘေး ( စစ်ပွဲဘေး ) ဆိုက် တယ်၊ စစ်ပွဲ မှန်သမျှ ဟာ ဒေါ သကြောင့် ဖြစ်ရတာ ချည်းပါ။ ဒီထက် ဒေါသဓါတ် တွေ များလာ မယ် ဆိုရင် ကမ္ဘာ လောကကြီး ဟာ ရေတွေ လွှမ်းမိုးပြီး ပျက်စီး သွားရတယ်။ ရေကြောင့် ကမ္ဘာ ပျက်ပြီ ဆိုရင် အပ္ပါယ် လေးဘုံ၊ လူ့ဘုံ၊ နတ်ဘုံ၊ ပထမ ဈာန် ဗြဟ္မဘုံ ၃ ဘုံ နှင့် ဒုတိယ ဈာန် ဗြဟ္မ ဘုံ ၃ဘုံ ပျက်စီး သွား ပါတယ်။
အမှန် ကို မသိတဲ့၊ တွေဝေ တဲ့ မောဟ ဓါတ်တွေ လူသား တွေ သန္တာန်မှာ အားကြီး လာမယ် ဆိုရင် ကမ္ဘာ လောကကြီး ဟာ ရောဂါ ဘေးဆိုက် တယ်။ အေအိုင်ဒီအက် (စ်)တို့၊ ဆားစ် ရောဂါ တို့၊ ကြက်တုပ်ကွေး၊ ၀က်တုပ် ကွေး ရောဂါတွေ ဟာ မောဟဓါတ် ကြောင့် ဖြစ်လာ တာပါ၊ ဒီ့ထက် မော ဟ ဓါတ်တွေ အားကြီး လာမယ် ဆိုရင် ကမ္ဘာ လောက ကြီး ဟာ လေတွေ လွှမ်း မိုးပြီး ပျက်စီး သွား ရပါတယ်။
လေကြောင့် ကမ္ဘာ ပျက် ပြီဆိုရင် အပါယ် လေးဘုံ၊ လူ့ဘုံ၊ နတ်ဘုံ၊ ပထမ ဈာန် ဗြဟ္မာ ဘုံ သုံးဘုံ၊ ဒုတိယ ဈာန် ဗြဟ္မာ ဘုံ သုံးဘုံ၊ တတိယ ဈာန် ဗြဟ္မာ ဘုံ သုံးဘုံ ထိ ပျက်စိးသွား ပါတယ်။ ကျန် တဲ့ ဗြဟ္မာ ဘုံ ( ၁၁ ) ဘုံ ကတော့ မီး၊ ရေ၊ လေ ဘာပဲ ဖျက်ဖျက် မပျက် ဘဲ ကျန် ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ လောကမှာ လူစ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ အဲဒီ ကျန် ခဲ့တဲ့ ဗြဟ္မာဘုံ ( ၁၁ ) ဘုံက ဗြဟ္မာတွေ ဗြ ဟ္မာ သက်ကုန်လို့ သေ ပြီး လူ့ဘ၀ ရောက်ရာ ကနေ စကြ တာပါပဲ။
အကျဉ်းချူပ် လိုက်ရင် တော့ ဘာကြောင့် ကမ္ဘာ ပျက် ရတာလဲ ဆိုရင် လူသား တွေ ရဲ့ သန္တာန် မှာ ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ဆိုတဲ့ ကိလေသာ တွေ ကြောင့် ပါပဲ။ ဒါကြောင့်လောဘ ကုန်ဖို့အတွက် ဒါန များများ ပြုပါ … ဓူတင် ဆောက်တည် ပါ … အသုဘ ဘာဝနာ ပွါးပါ …. ၀ိပဿနာ တရား နာကြား ရှုပွါး ပါ။ ဒေါသ ကုန် ဖို့ အတွက် မေတ္တာ ဘာဝနာ အမြဲ ပွါး ပါ ။မောဟ ကုန်ဖို့ အတွက် ရဟန္တာ ဖြစ်တဲ့ အထိ ၀ိပဿနာ တရား ကို နာကြား ရှုပွါးပါ။
ဥပသာဠကဇာတက ၊ ၁ ၊ ၄၁ ။
ဓမ္မပဒ ၊ ဋ္ဌ၊ ၂ ၊ ၃၄၂ ။
ဇာတက ၊ ဋ္ဌ ၊ ၂ ၊ ၅၀ ။
မီး – ရေ – လေကြောင့် ကမ္ဘာပျက်ပုံ
ကမ္ဘာပျက်တဲ့အခါမှာ မီးကြောင့် ပျက်တာလည်း ရှိတယ်၊ ရေကြောင့် ပျက်တာလည်း ရှိတယ်၊
လေကြောင့် ပျက်တာလည်း ရှိတယ်။ မီးကြောင့် (၇)ကြိမ်တိုင်တိုင် ပျက်ပြီးတဲ့အခါ (၈)ကြိမ်မြောက်တိုင်း (၈)ကြိမ်မြောက်တိုင်းမှာ ရေကြောင့် ကမ္ဘာကြီး ပျက်ရပြန်တယ်။
ဒီနည်းအတိုင်း မီးကြောင့် (၇)ကြိမ် ရေကြောင့် (၁)ကြိမ်, မီးကြောင့် (၇)ကြိမ်, ရေကြောင့် (၁)ကြိမ် – – ဆိုတဲ့ ဓမ္မတာအတိုင်း ကမ္ဘာကြီး ပျက်လာလိုက်တာ (၆၄)ကြိမ်ပြည့်တဲ့အခါ လေကြောင့် တစ်ခါ ကမ္ဘာကြီး ပျက်ရပြန်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကမ္ဘာကြီးဟာ မီးကြောင့် ပျက်တဲ့အခါလည်း ပျက်တယ်၊ ရေကြောင့် ပျက်တဲ့အခါလည်း ပျက်တယ်၊ လေကြောင့် ပျက်တဲ့အခါလည်း ပျက်တယ်။
မီးကြောင့် ပျက်တဲ့အခါ ကာမ (၁၁)ဘုံ နှင့် ရူပါဝစရဗြဟ္မာ့ပြည်ထဲက ပထမဈာန်သုံးဘုံအထိ အကုန်လုံး ပျက်တယ်။ ရေကြောင့် ပျက်တဲ့အခါ ကာမ (၁၁)ဘုံနှင့် ရူပါဝစရဗြဟ္မာ့ပြည်ထဲက ဒုတိယဈာန်သုံးဘုံအထိ အကုန်လုံး ပျက်တယ်။ လေကြောင့် ပျက်တဲ့အခါ ကာမ (၁၁)ဘုံနှင့် ရူပါဝစရဗြဟ္မာ့ပြည်ထဲက ဝေဟပ္ဖိုလ်ဘုံအောက် တတိယဈာန် သုံးဘုံအထိ အကုန်လုံး ပျက်တယ်။
အဲဒီလို ကမ္ဘာကြီး ပျက်နေတာလည်း အန္တရကပ်ပေါင်း (၆၄)ကြိမ်လောက်ပဲ အချိန်ကာလ ကြာညောင်း ပါတယ်၊ သံဝဋ္ဋကပ် = ပျက်ဆဲကပ်လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်၊ ပရမာဏုမြူခန့် အမှုန်ကလေးတွေတောင် မကျန်ရအောင် အားလုံး ပျက်သွားတယ်။ ပျက်သွားပြီး တဲ့အခါ ဘာမျှမရှိဘဲ လဟာပြင် အတိုင်း တည်နေတာလည်း အန္တရကပ်ပေါင်း (၆၄)ကြိမ်လောက်ပဲ အချိန် ကာလ ကြာညောင်းပါတယ်၊ သံဝဋ္ဋဌာယီကပ်လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်၊ အပျက်အတိုင်း တည်နေတဲ့ ကပ်ပဲ။
တစ်ခါ ကမ္ဘာပြုမိုး ရွာတဲ့အချိန်အခါက စပြီး နေ, လ, နက္ခတ်တာရာတွေ ထွက်လာတဲ့အချိန်အထိ ကမ္ဘာကြီး တည်လာတာလည်း အန္တရကပ်ပေါင်း (၆၄)ကြိမ်လောက်ပဲ အချိန်ကာလ ကြာညောင်းပါတယ်၊ ၀ိဝဋ္ဋကပ်လို့ ခေါ်တယ်၊ ကမ္ဘာတည် နေဆဲကပ်ပဲ။
နေ, လ, နက္ခတ်တာရာတွေ ထွက်တဲ့အချိန်အခါက စပြီး ကမ္ဘာကြီး ပျက်တဲ့အချိန်အထိ ကမ္ဘာကြီး တည်နေတာလည်း အန္တရကပ်ပေါင်း (၆၄)ကြိမ်လောက်ပဲ ကြာညောင်းပါတယ်၊ ၀ိဝဋ္ဋဌာယီကပ်လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်၊ တည်ပြီးအတိုင်း ဆက်လက် တည်ရှိနေတဲ့ ကပ်ပဲ။ ခုပြောခဲ့တဲ့ သံဝဋ္ဋ, သံဝဋ္ဋဌာယီ, ၀ိဝဋ္ဋ, ၀ိဝဋ္ဋဌာယီလို့ခေါ်တဲ့ ကပ်လေးကပ်ကို တစ်ကမ္ဘာလို့ေ ခ်ါဆိုပါတယ်။
အခု ဟောနေတဲ့ ဂဒ္ဒုလဗဒ္ဓသုတ္တန်မှာတော့ ကမ္ဘာပျက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မီးကြောင့်ပျက်တဲ့ ကမ္ဘာကို စံထားပြီးတော့ ဘုရားရှင်က တရားတော်ကို ဟောကြားတော်မူနေပါတယ်။ (ပထမဂဒ္ဒုလဗဒ္ဓသုတ္တန်)” ဖားအောက်တောရဆရာတော် “(စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတရားဒေသနာတော်)
မဟာသမုဒ္ဒရာရေ ခန်းခြောက်ချိန်ဟောတိ သော ဘိက္ခဝေ သမယော ယံ မဟာသမုဒ္ဒေါ ဥဿုဿတိ ၀ိသုဿတိ န ဘ၀တိ၊ န တွေဝါဟံ ဘိက္ခဝေ အ၀ိဇ္ဇာနီဝရဏာနံ သတ္တာနံ တဏှာသံယောဇနာနံ သန္ဓာဝတံ သံသရတံ ဒုက္ခဿ အန္တကိရိယံ ၀ဒါမိ။ ဘိက္ခဝေ = ချစ်သားရဟန်းတို့ …။ ယံ = ယသ္မိံ ကာလေ = အကြင် အခါကာလ၌။ မဟာသမုဒ္ဒေါ = မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးသည်။ ဥဿုဿတိ = အထက်၌ ခန်းခြောက်၍ သွားပေ၏။ ၀ိဿုဿတိ = အထူးထူး အပြားပြား ခန်းခြောက်၍ သွားပေ၏။ န ဘ၀တိ = မဖြစ်မရှိတော့ပေ။
သော သမယော = ထိုကဲ့သို့သော အချိန်အခါမျိုးသည်။ ဟောတိ = ရှိသေးသည်သာလျှင်တည်း။ တစ်ချိန် ကမ္ဘာပျက်ခါနီး ပြီဆိုတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုသို့ ဆိုက်ရောက်လာပြီ ဆိုကြစို့၊ အလွန် ကြီးကျယ်နေတဲ့ ရေထုထည် များပြားနေတဲ့ မဟာ သမုဒ္ဒရာကြီး ရှိတယ်။ နေတွေ တစ်စင်းပြီး တစ်စင်း, တစ်စင်းပြီး တစ်စင်း ထွက်လာရာက နေငါးစင်း လောက် ထွက်လာ ပြီဆိုရင် မဟာသမုဒ္ဒရာရေတွေ အားလုံး ခန်းခြောက်သွားတယ်။ အဲဒီလို အချိန်အခါမျိုးဟာ တစ်ချိန် ကြုံကြလိမ့်မယ်၊
သံသရာခရီး မဆုံးသေးရင်တော့ မိမိတို့ကလည်း လူ့ဘ၀မှာပဲ တည်ရှိနေကြသေးတယ်ဆိုရင် ဒီဒုက္ခက မိမိတို့ ရင်ဆိုင် ကြရမည့် ဒုက္ခတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို မဟာသမုဒ္ဒရာရေတွေ ခန်းခြောက်သွားတဲ့ အချိန်အခါမျိုး မှာတောင် သတ္တ၀ါတွေရဲ့ သံသရာခရီးကို ဘုရားရှင်က ဘယ်လို ဟောတော်မူသလဲ?
န တွေဝါဟံ ဘိက္ခဝေ အ၀ိဇ္ဇာနီဝရဏာနံ သတ္တာနံ တဏှာသံယောဇနာနံ သန္ဓာဝတံ သံသရတံ ဒုက္ခဿ အန္တကိရိယံ ၀ဒါမိ။
ဘိက္ခဝေ = ချစ်သားရဟန်းတို့ …။ တဒါ = တသ္မိမ္ပိ ကာလေ = ထိုကဲ့သို့သော အချိန်ခါမျိုး၌သော်လည်းပဲ။ အ၀ိဇ္ဇာနီဝရဏာနံ = အ၀ိဇ္ဇာနီဝရဏတရားသည် ပိတ်ဖုံးကာဆီးအပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍။
တဏှာသံယောဇနာနံ = တဏှာတည်းဟူသော သံယောဇဉ်ကြိုးက ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားအပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍။ သန္ဓာဝတံ = ထိုဘ၀မှ ဤဘ၀, ဤဘ၀မှ ထိုဘ၀သို့ တပြောင်းပြန်ပြန် ကျင်လည် ကျက်စား ပြေးသွား၍ နေကြရကုန်သော။
သံသရတံ = တစ်ခုသော ဘ၀၌လည်းပဲ ထပ်ကာထပ်ကာ ကျင်လည်ကျက်စား ပြေးသွား၍ နေကြရကုန်သော။ သတ္တာနံ = သတ္တ၀ါတို့၏။ ဒုက္ခဿ = သံသရာ ၀ဋ်ဆင်းရဲဒုက္ခ၏။ အန္တကိရိယံ = အဆုံးအပိုင်းအခြားကို ပြုခြင်းကို။ အဟံ = ငါဘုရားသည်။ နေ တွဝ ၀ဒါမိ = ဟောတော်မမူသည်သာလျှင်တည်း။
နေငါးစင်းထွက်လာလို့ မဟာသမုဒ္ဒရာရေတွေ ခန်းခြောက်သွားတဲ့ အချိန်အခါကာလတစ်ခု တစ်နေ့ ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်အခါမျိုးမှာသော်လည်း အ၀ိဇ္ဇာနီဝရဏတရားက ပိတ်ဖုံး ကာဆီးထားအပ်တဲ့, တဏှာတည်းဟူသော သံယောဇဉ်ကြိုးရဲ့ ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့မှုကို ခံနေရတဲ့ ဒီသတ္တ၀ါတွေရဲ့ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးဟာ ကုန်ဆုံးသွားလိမ့် မယ်လို့ ငါဘုရား မဟောဘူး။
ဘယ်ဆက်ရမလဲ? အ၀ိဇ္ဇာနီဝရဏပိတ်ဖုံးခံနေရတဲ့ သတ္တ၀ါတွေအဖို့ တဏှာတည်းဟူသော သံယောဇဉ် ကြိုးဖြင့် ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ခံနေရတဲ့ ဒီသတ္တ၀ါတွေအဖို့ ရှေ့သံသရာခရီးက ဆီးကြိုနေပါတယ်။ ထိုအချိန် အခါမှာပေါ့ ဘ၀တစ်ခု ကိုတော့ လက်ခံရမည့် အခြေအနေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လို ဘ၀ဆိုတာကတော့ ပြီးတော့မှ ထပ်ပြောမယ်။ နောက်တစ်ခု မြတ်စွာဘုရားက ဆက်ဟောတော်မူပြန်တယ်။ (ပထမဂဒ္ဒုလဗဒ္ဓသုတ္တန်)
ချစ်သူအတွက် သိန်း (၃၀၀) နီးပါး တန်ဖိုးရှိ Harley Davidson ဆိုင်ကယ်ကြီး လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး